Cisco Vohémar-CEPE: tsaho ny filazana fa misy « fuite de sujet » | NewsMada
Cisco Vohémar-CEPE: tsaho ny filazana fa misy « fuite de sujet »
Vaovao tsy marina ny mahakasika ny fivoahan’ny laza adina CEPE, araka ny fanazavan’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena. Tsaho ny vaovao miely milaza ny fisian’ny fivoahan’ny laza adina mialoha tany Vohémar ( faritra Sava). Misy en-tête “direction régionale de l’éducation nationale Sava” ny laza adina nasehon’ny filohan’ny Sempana Nosy ao Sambava ka nentiny nilazana fa misy “fuite de sujet”, kanefa tsy io ny « en-tête » any amin’ireo laza adina ofisialy hozaraina manditra ny CEPE. Miantso ny rehetra ho mailo manoloana ny fiparitahan’ireo vaovao tsy marina tahaka izao ny tomponandraikitra satria mampisavorovoro ny sain’ny rehetra.
Nandritra ny faran’ny herinandro, efa nijery ny efitrano hanatanterahana ny CEPE ny mpiadina. Natao lisitra teny amin’ny varavarana isanisany ny anaran’ny mpiadina ka afaka nanamarina ny azy tao avokoa ny tsirairay. « Tsy tokony hanana ahiahy ny rehetra fa vonona amin’ny olona sy ny fitaovana fanaraha-maso ary hitsara ny kopian’ny mpiadina », hoy ny tomponandraikitry ny minisitera mpiahy.
Ho an’ny Cisco sasany toy ny any Antsirabe, nisy ny fandaminana nametrahana fiara lehibe manokana hitatitra ny mpiadina lavi-podiana hanao CEPE. Mandalo amin’ny toerana maromaro ny lalan’ny fiarabe, amin’ny 6 ora maraina ny fiaingana ho an’ireo handeha.
Miara-miasa amin’ny mpitandro filaminana ny minisitera manomboka amin’ny fiambenana ny laza adina sy ny fanaraha-maso ny fizotry ny fanadinana ao anatin’ny tontolo andro.